Wararkii ugu dambeeyay weerar hoobiyaal ah oo caawa lagu weeraray degmooyinka Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay weerar hoobiyaal ah oo caawa lagu weeraray degmooyinka Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa tiro hoobiyaal ah oo aan la ogeyn meesha laga soo tuuray oo caawa lagu weeraray xaafadaha ku yaala degmooyinka magaalada Muqdisho.
Madaafiicdaan oo dhawaqooda si weyn looga dareemay guud ahaan magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay ku dhaceen xaafadaha ku yaala degmooyinka Wardhiiley, Waaberi, X/weyne iyo X/jajab, gaar ahaan nawaaxiga xarunta Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Xarunta Afisyoone oo ku taala degmada X/jajab ayaa la qorsheeynayaa in maalinta berri ah lagu qabto doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, saacadihii ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo rogay bandow socon doonna muddo laba maalmood ah, kaas oo looga hortagaayo weerarada ismiidaaminta ah oo ay Al-shabaab ku qaadaan xarumaha dowladda Soomaaliya.
Illaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay madaafiicdaan hoobiyaasha ah, iyadoona xaaladda magaalada Muqdisho ay caawa tahay mid aad u kacsan.
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Waaberi kusoo qabtay tiro dad ah, kuwaas oo looga shakisan yahay inay wadeen falal amni daro ah.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan caawa lagu qaaday degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa kusoo beegmaya xilli maalinta berri la filaayo in magaalada ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo in muddo ah la sugaayay.